Izaqathe Ezishubile (Freezer Friendly!) - Ungadliwa
ukuthi wenzeni ngezindlela zokupheka zomvini omuncu
unombala onjani wesifuba senkomo lapho uphekwe ngokuphelele
ubhontshisi omuhle wasenyakatho wasolwandle
Izaqathe ezinamanzi ziyisitsha esilula esilula sasebusuku samasonto aphuthumayo!
Izaqathe ezishubile zinemibala futhi zimnandi ngokwemvelo, futhi zengeza umfutho wokudla okunomsoco kunoma isiphi isidlo! Le recipe kulula kakhulu ukuyenza futhi inhle nganoma yini enhle kakhulu!
inyama yenyama enokupheka kwe-chili sauce kulula
I-Side Side Dish elula
Izaqathe ezintsha ezinamanzi zinambitha kangcono kakhulu kuneziqhwa noma okusemathinini!
Zithengeka futhi kulula ukuzilungiselela. Ungathenga izikhwama zezinqathe zezingane okusho ukuthi akukho ngokoqobo ukulungiselela lokhu iresiphi!
Okokugcina, izaqathe ezine-steamed zenza i-thickener enkulu ne-sweetener engokwemvelo kumasoso namasobho (ngiyangeza ku I-marinara esikhundleni soshukela).
AMAKHARROTI Le iresiphi elula idinga izaqathe. Sebenzisa izaqathe zensimu, izaqathe zezingane, izaqathe zokudla ezivamile! Uma izaqathe zijiyile impela, ngizisika zibe uhhafu ngobude.
IZINSUKU Kufakwa ibhotela, usawoti kanye nopelepele kulezi izaqathe ezishubile. Zama ibhotela likagalikhi, isinongo sase-Italy, noma i-paprika ngokukhahlela (noma ushukela omncane onsundu uma ungathanda)!
Indlela Yokupheka Izaqathe
Ngomzamo omncane, le dish esiphundu eseceleni ingakulungela ukuhamba ngemizuzu!
Ungabamba Kanjani Izaqathe kuStovetop
Beka ubhasikidi we-steamer wezinqathe ku-stockpot ngamanzi ngezansi kwebhasikidi.
Letha amanzi ukuze ubile bese umboza ibhodwe.
Vumela izaqathe ukuba zishise ubila ngokusho kwemiyalo yokupheka engezansi.
Susa izaqathe bese uphonsa ngebhotela nangezinongo.
Indlela Microwave izaqathi
chitha ngamasenti iklabishi roll roll
Faka izaqathe ezilungiselelwe endishini ephephe ngemicrowave ene-¾ inkomishi yamanzi.
Vala ngethawula lephepha noma ngeplastiki. Faka izimbobo ngaphezulu kwesiqa sepulasitiki ukuvumela umusi uphume.
Pheka phezulu imizuzu emithathu ngesikhathi noma kuze kufike izaqathe, cishe imizuzu eyi-9-12 isiyonke.
Gcina izaqathe ezishubile esitsheni esingangeni manzi esiqandisini izinsuku ezifika kwezine.
Ziphinde zifake ku-microwave.
Noma, engeza okusele ku isobho noma isitshulu (engeza ngaphambi nje kokuphaka ukuze bangaphuzi ngokweqile).
Mash okusalile bese ukungeza ku amazambane abondiwe , noma kuze kube amazambane acubuziwe .
Ingabe wenze lezi izaqathe ezinamanzi? Qiniseka ukuthi ushiya isilinganiso namazwana ngezansi!
I-Creamy Carrot Soup Recipe
Isaladi le-Carrot elimnandi
Izaqathe Eziwosiwe Ezilula
Isanqante Banana Isinkwa
Isikhathi sokulungiselela5 imizuzu Isikhathi Sokupheka10 imizuzu Isikhathi Esipheleleishumi nanhlanu imizuzu Izinkonzo4 UmbhaliUHolly Nilsson Lezi izaqathe ezinamanzi zinethenda futhi zimane nje zifakwe ibhotela, usawoti kanye nopelepele. Phrinta Phina
▢1 iphawundi izaqathe (cishe izaqathe ezi-5 eziphakathi nendawo)
▢ezimbili wezipuni ibhotela
Sika izaqathe zibe yizinti 2 'ezinde nobude ½' (noma sebenzisa izaqathe zezingane).
Beka izaqathe kubhasikidi wesitimu. Faka amanzi ezansi kwepani ukuze ibe ngaphansi kwebhasikidi lesitimu, cishe 1 inkomishi.
Letha kumathumba, unciphise ukushisa ukuze umile bese umboza. Vumela izaqathe ukuba zishise imizuzu engu-8-11 noma kuze kube yilapho ithenda likhipha.
Phonsa izaqathe ngebhotela, usawoti kanye nopelepele. Khonza ufudumele.
Qinisekisa ukuthi amanzi awahwamuki ngenkathi epheka, engeza ngaphezulu uma kudingeka.
I-steam iyashisa kakhulu, qaphela lapho ukhipha isivalo ngemuva kokushisa. Ingadi izaqathe ezintsha noma zezingane zizopheka ngokushesha ngenkathi isitolo sithengiwe izaqathe zingadinga imizuzu embalwa eyengeziwe.
Amakholori:97,Amakhabhohayidrethi:ishumi nanyeg,Amaprotheni:1g,Amafutha:6g,Amafutha agcwalisiwe:4g,Cholesterol:ishumi nanhlanumg,I-Sodium:128mg,Potassium:363mg,Umucu:3g,Ushukela:5g,Uvithamini A:19119IU,Uvithamini C:7mg,I-calcium:37mg,Insimbi:1mg
Igama elingukhiyeizaqathe ezihamba phambili ezihamba phambili, Ungazenza Kanjani Izaqathi Ezishubile, Izaqathe Ezinesitimu InkamboSide Dish KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .